Mpanamboatra vokatra | China Products mpamatsy sy orinasa
Manampahaizana manokana amin'ny famokarana harato miady amin'ny biby azo zahana mba hisorohana ny biby sy ny biby
Ity vokatra ity dia afaka misoroka tsara ny bibidia tsy hiditra amin'ny voly. Azo ampiasaina amin'ny manodidina ny voly sy ny zaridaina eny amin'ny faritra be tendrombohitra na ny tahirim-boajanahary izay ahitana bibidia. Manakana ny bibidia tsy hiditra amin’ny voly sy hazo fihinam-boa izany. Afaka miaro ny fiarovana ny olona sy ny biby koa izy io ary manakana ny vorona tsy hiditra amin'ny voly.
Mpanamboatra matihanina amin'ny harato miady amin'ny havandra avo lenta
Ny harato manohitra ny havandra dia karazana lamba vita amin'ny polyethylene miaraka amin'ny anti-aging, anti-ultraviolet ary additives simika hafa ho akora fototra.
Manampahaizana manokana amin'ny famokarana harato rivotra avo lenta mba hanoherana ny rivo-doza mahery vaika
Ny lokon'ity vokatra ity dia fotsy sy manga indrindra, ary ny lavany sy ny sakan'ny vokatra dia azo amboarina araka ny filan'ny mpanjifa manokana. Ny lanjan'ny harato dia 70g-100g/㎡.
Manakana ny tara-masoandro sy ny maripana ambony ny mpanamboatra harato aloka avo lenta
Ny harato shading, fantatra ihany koa amin'ny hoe harato shading, no karazana fitaovam-piarovana manokana indrindra ho an'ny fambolena, jono, fiompiana, rivo-drivotra, ary fandrakofana tany izay nampiroborobo tao anatin'ny 10 taona lasa. Aorian'ny fandrakofana amin'ny fahavaratra dia mitana anjara toerana amin'ny fanakanana ny hazavana, ny orana, ny moisturizing ary ny hatsiaka.
Ity vokatra ity dia afaka misoroka tsara ny vorona tsy hiditra amin'ny voly.
Afaka manakana ny alikadia sy ny saka dia tsy hiditra sy hivoaka mba hiantohana ny fitomboan'ny vokatra ara-pahasalamana.
Ity vokatra ity dia manana fiantraikany tsara amin'ny vorona, fametrahana mora ary mora ampiasaina.